Vaovao - Hisy fiovan'ny virus corona
Virosy Novel Corona dia notaterina tany Angletera, Afrika Atsimo ary Nizeria nanomboka ny volana desambra. Firenena maro manerantany no namaly haingana, anisan'izany ny fandrarana ny sidina avy any UK sy Afrika atsimo, raha nanambara kosa i Japon fa hampiato ny fidiran'ny vahiny manomboka ny alatsinainy teo.
Raha ny antontan'isa navoakan'ny Oniversite Johns Hopkins any Etazonia dia nihoatra ny 80 tapitrisa ny isan'ny tranga COVID-19 ary ny isan'ny maty dia nihoatra ny 1,75 tapitrisa hatramin'ny alahady voalohany tany Beijing.
Tsy mahagaga raha niovaova ny tsimok'aretina Corona, satria ny viriosy RNA misy azy dia manana taham-piovaovana haingana. Ny virus Novel Corona dia marin-toerana kokoa noho ny virus RNA hafa toy ny virus gripa gripa. Ny tsimokaretina Novel Corona dia miova amin'ny taha miadana kokoa noho ny virus gripa, hoy ny lehiben'ny mpahay siansa WHO, Sumiya Swaminathan.
Ny mutation virus Novel Corona dia efa notaterina. Tamin'ny volana febroary, ohatra, dia hitan'ny mpikaroka fa misy ny tsimok'aretina Corona vaovao miaraka amina mutation D614G izay niparitaka be indrindra tany Eropa sy Amerika. Ny fanadihadiana sasany dia nahatsikaritra fa ny viriosy misy mutation D614G dia mifanaraka kokoa.
Na dia teo aza ny fiovan'ny fototarazo maro tao amin'ny virus hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19, dia tsy nisy na dia iray aza ny mutation fantatra, anisan'izany ny iray tany Angletera, izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny zava-mahadomelina, fitsaboana, fitsapana na vaksinina, hoy ny manam-pahaizana iray tamin'ny WHO.
Azafady mifandraisa aminay raha mila karatra fitsapana antigen COVID-19 ianao.